सुरक्षा/अपराध महिलामाथि प्रहरीद्वारा कुटपिट, भिडियो भाइरल भएपछि हेडक्वार्टरले भन्यो- पहिचान गरेर कारबाही गर्छौं
काठमाडौं- एक महिलामाथि प्रहरीले कुटपिट गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। निषेधाज्ञामा हिँड्डुल गरेको भन्दै प्रहरीले ती महिलालाई कुटपिट गरेको भिडियोको सम्वादबाट बुझ्न सकिन्छ।
भिडियो कुन ठाउँको हो? कुटपिट गर्ने प्रहरी को हुन् भन्ने खुलिसकेको छैन। सामाजिक सञ्जालमा उक्त भिडियो पोस्ट गर्दै प्रहरीको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।
तपाईंलाई हान्‍न सरकारले अधिकार दिएको हो? भन्दै महिलाले कुटपिट गर्ने प्रहरीलाई प्रश्न गरेको सुनिन्छ।
प्रहरीले भने ‘हो हो’ भन्दै ती महिलाको पिडुँलामा एक लट्ठी हानेको देखिन्छ। र, ‘उता जाऊ न, तिमी किन अटेरी बनेको हँ? जाऊ तिमी समस्यामा परेको भए जाऊ। को होउ तिमी हँ? मेरो जागिर खान्छौं? हँ को हो?’ भन्दै ती महिलालाई धम्क्याउँछन्।
त्यसपछि ‘युवतीले मेरो बाबा पनि जागिर खाएको मान्छे हो’ भन्छिन्। तपाईंलाई लट्ठीले हान्ने अधिकार कसले दियो भन्दै फेरि ती महिलाले सोध्छिन्। प्रहरीले हो हो भनेको संवाद भिडियोमा सुनिन्छ। भिडियो अन्य पाँच-छ जना मान्छेहरु पनि उपस्थित भएको देखिन्छ।
यसरी एक महिलालाई प्रहरी धम्क्याउँदै कुटपिट गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै चौतर्फी विरोध भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानविन थालेको जनाएको छ। नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरले भने, ‘भिडियोको बारेमा हामीलाई पनि भर्खर जानकारी आएको छ। लोकेट गदैर्छौं। कहाँको रहेछ, कुटपट गर्ने को हुन् भन्ने केहीबेरमा पत्ता लागिहान्छ। कुटपिट गर्ने प्रहरीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउछौं।’
यस्ता एकाध नराम्रा घटनाले सिंगो प्रहरी संगठनलाई बद्‍नाम गराउने भएकाले यस्ता गतिविधि गर्ने जो कोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने प्रवक्ता कुँवरले बताए।